Ciimmada Kenya oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah deegaannada Al-Shabaab xarunta u ahaa iyo halista Kismaayo | Berberanews.com
Home WARARKA Ciimmada Kenya oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah deegaannada Al-Shabaab...
Ciimmada Kenya oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah deegaannada Al-Shabaab xarunta u ahaa iyo halista Kismaayo
Badhaadhe-(Berberanews)- Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay Ciidammadoodu si buuxda gacanta ugu dhigeen, isla markaana kala wareegeen Malleeshiyada Al-Shabaab degmada Badhaadhe oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya.
Ciidamanka Kenya oo kaashanaaya dagaalyahanka Ciidanka dawladda Ku-meel-gaadhka Soomaaliya eek u sugan deegaannada Raas-Kambooni, ayaa sheegay in ay qabsadeen Degmada Badhaadhe ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Afhayeenka Milliteriga dawladda Kenya Gaashaanle Emanuel Chirchir ayaa oo Saxaafadda dalkiisa kula hadlay magaalada Nairobi, ayaa sheegay in Ciidanka Kenya iyo kuwa dawladda Ku-meel-gaadhka Soomaaliya oo iskaashanayaa ay si buuxda ula wareegeen gacan-ku-haynta degmada Badhaadhe, ka dib markii maanta dagaal culusi ku dhexmaray Ciidammadaas iyo xooggaga Malleeshiyada Al-Shabaab.
“Al-Shabaab way ku jabeen dagaalka ka dib markii ay ka xidhantay waddada kaliya ee isku xidhi jirtay Galbeedka deegaannada kaga beegan Kismaayo. Si buuxda ayaannu Al-Shabaab ugala wareegnay degmada Badhaadhe oo ay ka talin jireen.” Sidaa ayuu yidhi Afhayeenka u hadlay Ciidammada dawladda Kenya. Waxaanu Afhayeenka Millateriga Kenya sheegay inay hadda isu diyaarinayaan Ciidankoodu sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Kismaayo oo ah xarunta guud ee ay Al-Shabaab wakhtigan sida tooska ah gacanta ugu hayso dalka Soomaaliya. Iyada oo degmada maanta ay qabsadeen Ciidanka Kenya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose u jirta masaafo dhan sida la sheegay 180 KM.
Afhayeenka Raas-Kambooni Cabdinaasir Seeraar ayaa weriyaha BBC ee Nairobi Cabdirissaq Xaaji Catoosh u sheegay in ciidankooda oo damacsanyahay in uu horey ugu sii durko aagaasi.
Ciidammada dawladda Kenya ayaa muddo ka badan 100 maalmood ku jira gudaha Soomaliya, Badhaadhe ayaa ah xarruntii ugu horreysay ee Degmeed ee ay sheegaan in ay qabsadeen, waxaana lagu tilmaami karaa qabashada Badhaadhe guushii ugu horreysay ee ay Ciidanka Kenya ka gaadhaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab ee ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Qaranka oo faahfaahin ka bixiyey waxa loo baajiyey xuska 19-guurada Ciidanka iyo dagaalkii Buuhoodle
Next articleSomaliland: Journalist Urges UK Party to Promote Recognition